Yintoni eyoyikisa abantu kumhla wokuqala wokuqala
Ngokukhawuleza emva kwentlanganiso, kubonakala ngathi yonke into ihamba kakuhle, kodwa usuku lwesibini luya kudlula, kwaye umntu ovele ebonakala ephaketheni lakho ngokucacileyo akayi kukhawuleza ukubiza ukucwangcisa enye incomo. Ngenxa yoko, umfazi uqala ukumfuna isizathu, kwaye akanakucinga nokuba yintoni isizathu esikuyo. Kulula kakhulu, kukho abesifazana abathi, ngaphandle kokuqaphela, bayesabisa amadoda. Njengoko bathetha isilumkiso-ke, baxhobile. Siza kuqonda ngakumbi iindidi zabasetyhini abathusa amadoda emva komhla wokuqala.
Umphathi webhinqa. Akusiyo imfihlo abantu abazama ukuhlala kuyo-kude nabesifazane abaqinileyo nabazithembayo. Ukuba ibhinqa ayinayo i-softness and coquetry, ayiyi kukhawulela into.
Indlela yokuhlangabezana nale meko? Kufuneka ufunde ukujikeleza iingqungquthela ezinde. Makhe umntu azi ukuba unamandla kunawe, kwaye akunandaba, nokuba akunjalo.
Umntu onomthandayo ungumhlobo. Kukho amabhinqa abakwazi ukwenza umtsalane olungileyo kumhla wokuqala, kodwa oku akusoloko kunjalo. Ngamantombazana afanayo, abameli besondo esinamandla bakhetha ubudlelwane, kodwa kungekhona njengobunye abahlobo obunzulu. Iimpawu eziphambili ezibonisa ukuba zilolu hlobo lwabesifazane zihlala zivuma ukuba indoda ingabuyi kuyo nayiphi na imeko imomotheka nayo yonke into engabonisa ukungabikho kwakhe imbono yowesifazane.
Ukuba le miqondiso iyaqhelana nawe ngokwakho, kufuneka uguqule into kuwe, ngaphandle koko, kukho isongelo sokuba yindoda yombane, kunye nesiqingatha sesibini.
Ungaba njani kule meko? Tshintsha! Musa ukukhawuleza kungekhona, kodwa ugxininise kwaye ungenakunqikaza. Zigqibo ngoluvo lwakho, funda ukulila nokulikhusela. Ukuphucula i-wardrobe, utshintshe ubuninzi beentambo kunye ne-bianchi kwiingubo zesifazane kunye neenhle. Uya kumangaliswa ukuba utshintsho lweendawo luyakushintsha njani umhlaba jikelele!
Wayeyazi. Olu hlobo lwabasetyhini luyahlukahluka kwiindawo zokuziphakamisa. Oku akubalulekanga, kodwa konke kulungile! Akunakuqonda ukupenda phambi komntu, ngakumbi ukuba oko akubonayo kuya kuphikisana noko uthethayo. Kule meko, kunokwenzeka ukuba ukuthengiswa kuya kuzisa umphumo olungileyo, kodwa emva kwexesha, indoda ibona ukuba yonke into ayifani njengento enhle kwaye enhle njengoko ithenjisiwe.
Yintoni endiyenzayo kwimeko enjalo? Ungazami ukufihla ukungaphumeleli kwakho, uchaza ngokugqithiseleyo impumelelo yakho nesidima. Injongo kukuba, akuyimfuneko ukukhupha ukubonakala kobunzima bokungahambisani nomntu. Khumbula, umntu ngamnye unempawu ezinokuthi zivimbele iimpazamo zabo.
Eli bhinqa nguyo ukumkanikazi. Iimpawu eziphambili ezibhekiselele kubulungu balaba bafazi zibandakanya izicelo ezigqithiseleyo, kungekhona nje kwimigangatho yezinto eziphathekayo, kodwa nakwiindiza zeempawu ukuba umntu ofanelekileyo ukuba abe kufuphi nekhephu kufuneka agqoke.
Yintoni ongayithetha kubafazi abanjalo? Ixesha lokuba lula!
Umfazi uguqa. Uluhlu luzithetha ngokwalo! Awufaneli nantoni na, ubomi abuyikubetha, imimoya iyatshatyalaliswa, abanye bayayixabanga, njl njl. Umntu oqhelekileyo akayi kukunyamezela into enjalo, kwaye akunandaba nokuba yintoni isondo naye!
Yintoni ekhoyo ukucebisa? Ukujonga emva kwaye uzama ukubona nantoni ehlabathini elungileyo, oku kuya kuba yinyathelo lokuqala ekuguquleni, kuba ngaphezulu kuninzi.
Umfazi. Kucacile ukuba ngokukhawuleza okanye kamva yonke into eyona mfihlelo iyabonakala, kodwa akuninzi ukunyanzelisa imicimbi. Abafazi balolu hlobo, ngokukhawuleza bazenze njengendoda yokugqoka, becinga malunga nokuba uya kuba yindoda. Akukubi, kodwa akufanelekile ukuvakalisa zonke iingcinga eziza engqondweni yakho xa ukhangela umntu.
Ungayilungisa njani imeko? Gcina izicwangciso zakho zexesha elizayo kunye kunye nawe, mhlawumbi abantu baya kubaleka.
Amantombazana aseVulgar. Kukho abafazi abangaboni umgca phakathi kokugqoka ngokwesondo, kunye nehenyukazi. Ngaphezu koko, bathanda ukuthetha ngazo zonke izithandwa zabo ngosuku lokuqala kwiinkcukacha. Kwaye lo hlobo lwabafazi, okwesibini kunokwenzeka ngaphandle kokuqala.
Njani ukuba? Nangona iinjongo zentlanganiso yiseseshoni esilandelayo, akufanele ube yintlonelo, ayikwazi nje ukutshitshisa indoda, inokukugxeka. Akuyena wonke umntu oza kuthanda ukuba ngumthumeli wakho. Ngoko ke, imfihlelo encinci iya kunceda kakhulu kunokuba iinkcukacha zobomi bakho bobulili.
Indlela yokuqala ubomi ukususela ekuqaleni?
Iimbangela zokulondeka kwabasetyhini abaninzi
Indlela ongaphandle ngayo ukuba ngumfazi obuthathaka
Khawuleza ukulibala njani umthandayo?
Isicelo seFebruwari 23 kubantwana abane-3-4 ubudala, abaphakathi kunye nabaphezulu be-kindergarten, iifoto ngeyiteyathelo. Indlela yokwenza isicelo sePapa ngoFebruwari 23 esikolweni, ividiyo
Iibhokiti zeTokotle kunye nezizaliso zokukhetha
Unyango lweparatiyamu kunye namayeza omntu
Thenga umtshato omhle
Icandelo leSesare: indlela echanekileyo yokuphuma?
UJulia Kovalchuk ekwindla ngokokuqala ngqa uya kuba ngumama